MNP မုဒုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မိလေးမွန် (အင်တာဗျူး) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ / MNP မုဒုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မိလေးမွန် (အင်တာဗျူး)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ September 6, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 294 Views
ရေးသားသူ: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ > ချစ်မင်းထွန်း
မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ-ဆရာမတို့အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိလို့ပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို
ပြင်ဆင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ကိုယ်တစ် ယောက်တည်းနဲ့တော့ မပြင်နိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ပေးနိုင် မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်ကို ဆောင်ရွက်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလွှတ်တော်မှာ အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ဆရာမတို့ မွန်အမျိုးသမီး တွေပေါ့ နော် မွန်အမျိုးသမီးတွေက နိုင်ငံရေးနဲ့တော်တော် အလှမ်းဝေးတယ်။ နိုင်ငံရေးအသိ နိုင်ငံရေး အမြင်တွေက အားနည်းနေတယ်ပေါ့။ ဆရာမ ကိုယ်တိုင်ကလည်း နိုင်ငံရေးကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်သိတာမဟုတ်သေးဘူး ဒါပေမဲ့ မွန်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်စား ကိုယ်တိုင် ထိုးဖောက်ကြည့်တာပေါ့နော်။
မေး-အခုလို ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းက မွန်လူမျိုးတွေ၊ မွန်ပြည်နယ်သား အတွက် ဘာတွေ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဖြေ-ကျွန်မတို့က ပြောရမယ်ဆိုရင် မွန်ကိုယ်စားလှယ်ဘဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ မွန်ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးကို တသွေးတသားတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ့်ဒေသမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စတဲ့ ဒီလိုအပ်တွေကို ကျွန်မတို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးချင်ဖို့ ကျွန်မ ကိုယ် စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရရင် ကူညီနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး-တကယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရပြီးဆိုပါက တကယ်ဘဲ မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား?
ဖြေ-ကျွန်မရဲ့ ယုံကြည်ချက်အရတော့ ကျွန်မတို့ အနိုင်ရခဲ့ရင် ကျွန်မတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့် ပေးခဲ့ရင် မွန်ပြည်နယ်တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ အရွေးချယ်ခံရပြီး ကျွန်မတို့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိရင်တော့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်ချက်ကလည်း နစ်မြုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲကနေ ရတဲ့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီးတော့ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေများထဲကနေ တကယ် လက်တွေ့ကျတဲ့ အချက်တွေကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။
မေး-အခု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ ဆရာမအနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ?
ဖြေ-ဆရာမ အရွေးချယ်ခံမယ့် နေရာက လယ်သမားတွေများတယ်။ လယ်ယာမြေတွေ ခြံတွေများတယ်။ အဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးချင်တယ်။ ဥပမာ လယ်သမားဆို ရင်လည်း လယ်သမား ကဏ္ဍပေါ့နော်။ သူတို့အတွက် ကိုယ့်ဘာလုပ် ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစား ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်။
အဓိကတော့ သူတို့ရဲ့လယ်ယာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကုန်ကြမ်းကနေ ကုန်ချောအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ရင် ပိုပြီးတော့ သူတို့အတွက် အကျိုးစီးပွားဖြစ်မယ်။ ဒါတွေကို လုပ်ပေး ချင်တယ်။ စပါးအထွက်နှုန်းလျော့တဲ့ နေရာဆိုရင် စပါး အထွက်နှုန်းများလာအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေး သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ပြီးတော့ ခြံသမားဆိုရင် ရာဘာကိစ္စပေါ့။ ရာဘာစျေးကွက်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးချင် တယ်။ အခုဆိုရင် ရာဘာစျေးက ချနေတယ်။ ဒါကို ဘယ်လို တက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့။
မေး-ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါက ဘယ်ကိစ္စရပ်ကို ပထမဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင် ပေးသွား မယ်ဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားထားပါသလဲ ခင်ဗျာ?
ဖြေ-ဘယ်ကိစ္စကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့က ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ့။သူတို့ဘာလိုအပ်လဲ သူတို့ရဲ့ ဦးစားပေး လိုအပ်ချက်ကို ကျွန်မတို့ ကြည့်ပြီးတော့ ဒါကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
မေး-နောက်တစ်ခုက မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေထဲကနေ ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင် ဆောင် ရွက်ပေး သွားဖို့ရှိပါသလဲ?
ဖြေ-ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရေး ကောင်းမှ အားလုံးကောင်းမှာဆိုတော့လေ စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊ အားလုံးပေါ့။ အဲ့တော့ ၂၀၀၈ ကို ပြင်ဆင်နိုင်မှ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေ အားလုံးရလာမှာလေ။အဲ့တော့ ကျွန်မတို့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အရင်ဆုံး ပြင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့ မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဆရာမတို့က လွှတ်တော်တွင်း လွှတ်တော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ဟန်ချက် ညီညီနဲ့တခြား လုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေ လုပ်ဆောင်သွားမယ်။
မေး-မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကော ဘာတွေ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထား ပါသလဲ?
ဖြေ-မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင် စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ မိခင် ဘာသာစကား စာပေတွေကို အစိုးရကျောင်းမှာ အနှစ် ၅၀ ကျော်ကျော် အလှမ်းဝေးပြီး သင်ကြား ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ မွန်ဘာသာကို အစိုးရ ကျောင်းတွေမှာ သင်ကြားခွင့်ရအောင် လုပ်မယ်။
ဒါကလည်း ပြင်ပအချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျောင်းတွင်းအချိန်မှာကိုရောဘဲ သင်ကြားခွင့်ရအောင် ကျွန်မတို့ ကြိုးစားပေးသွားမယ်။ မွန်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှု အခန်းကဏ္ဍတွေကိုလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာအောင် လုပ် ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်၊ ဒါမှ မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ တန်ဖိုး မြှင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက် ကျွန်မ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ အဆုံးစွန်ထိအောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါ့မယ်။
ဖြေ-အဓိက မှာကြားချင်တာကတော့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးဖို့ပေါ့လေ။ အားလုံး ညီညွတ်ကြပါ ကျွန်မတို့ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြမှသာလှျင် အရာရာကို အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် စည်းလုံး ညီညွတ်ကြပါလို့ မှာကြားချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့ဆန္ဒမဲတစ်မဲသည် ပြည်သူလူထုကို တကယ်ဘဲ အလုပ်အကျွေးပြုမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦး အတွက် ဖြစ်ဖို့ ဂရုတစိုက်နဲ့ မဲထည့်ကြပါ၊ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ရဲ့မဲဟာ ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့ လူဆီကို ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လက်တွဲ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်သွားနိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသာ မဲပေးရွေးချယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အမည် – ဒေါ်ကျင်သန်း(ခ)မိလေးမွန်
အလုပ်အကိုင် – အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး(ငြိမ်း)၊ ရာဘာခြံလုပ်ငန်း။
ပညာအရည်အချင်း – B.A, B.Ed
မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၁.၁၁.၁၉၅၀
မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၀/မဒန(နိုင်)၀၅၆၉၂ရ
လက်ရှိ နေရပ်လိပ်စာ – မုဒုံမြို့နယ်၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ။
အဖအမည် – ဦးလှုိင်
ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ် – မုဒုံမြို့နယ်၊
ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် – ပြည်သူ့လွှတ်တော်
-ရှင်စောပု မွန်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်အသင်း၊ မြို့နယ်ဥက္ကဌ။
-၂၀၀၄-၂၀၁၀ အထက(၂) ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး၊ သံဖြူဇရပ်မြို (အငြိမ်းစားယူ)
-၁၉၉၉-၂၀၀၂ အလကကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး-အာရုတောင်ရွာ၊ ရေးမြို့နယ်။
-၁၉၈၃-၁၉၉၉ အထက်တန်းပြ၊ အထကတံခွန်တိုင်ရွာ၊ မုဒုံမြို့နယ်။
-၁၉၈၀-၁၉၈၂ အလယ်တန်းပြ- အထက သံဖြူဇရပ်မြို့။
-၁၉၇၆-၁၉၇၉ မူလတန်းပြ- အမက ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ မုဒုံမြို့နယ်။
-၁၉၇၄ မှ ယနေ့အထိ မွန်၊ ဗမာ နှစ်ဘာသာဖြင့် “မိလေးမွန်” ကလောင်အမည်ဖြင့် ဝတ္တုတိုများရေးသားခြင်း။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ ချစ်မင်းထွန်း 2015-09-06
Tags ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ ချစ်မင်းထွန်း
Previous AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်အံက်သာ (ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
Next မြေယာအငြင်းပွားမှု တရားလိုပြသက်သေမလာရောက်သဖြင့် စီရင်ချက်မချနိုင်